အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ ဒီလို
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ မသူတော်ရဲ့ ကွန်မန့်ပါ လင့်ခ် က နတ္ထိပါ သတ္တိရှိတာဒီလို တီလဲစာဖတ်သူတွေကို အားနာလို့ မတင်တော့ဘူး စိတ်ကူးပါတယ် ဒါပေမယ့် အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါလား လို့ သိအောင်ပါ (ထည့်တာတောင် ဗဟုသုတများ ဆိုတဲ့ Category မှာထည့်ပေးထားပါတယ် ဒါလဲယူတတ်ရင် ဗဟုသုတပါပဲ လောကမှာ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျနေတဲ့ လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိလာတာပေါ့) ယောက်ျားထုနဲ့ ချီပြီးမပြောချင်ပါဘူး ယောက်ျားကောင်းတွေအများကြီးရှိတော့ မသူတော်တကောင် ကြောင့် တလှေလုံးပုပ် မပြောချင်တာပါ english လိုတော့ worm လို့သာသာကလေးသုံးပါတယ် လူထက်နိမ့်ကျတဲ့အကောင်မျိုးကို ပြောတာပေါ့...ဒီလောက်ပါပဲ ဘာပဲပြောပြော အစဉ်တစိုက်အမြဲမနေနိုင်မထိုင်လာရောက်အားပေးနေတဲ့ မသူတော် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကြံဖန်တင်တတ်ရင်တော့ ရတာပါပဲ ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့...........
ဒီစာကို ဖတ်တော့မှ တီချမ်းဆိုတဲ့ အခြောက်မဟာ အရပ်ပျက်မလောက်တောင် အဆင့်အတန်းမရှိတာ ပို သေချာတယ်။လီးတကာလိုက်စုပ်၊ လူတကာ ဖင်လိုက်ခံနေတာ ခောတ်မှီတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေက ရှိသေး။ အံ့ရောဗျာ......တစ်ည လီးတစ်ချောင်းမှ ပါးစပ်ထဲ၊ ဖင်ထဲ မ၀င်ရ မနေနိုင်တဲ့သူ.. ဒီရောဂါရတာ မဆန်းပါဘူး။အခြောက်မနှင့် သူ၏ ယောက်ျားမမှန်သော လင် (တစ်ဖင်ခံ)များ..ဖတ်ရတာ လောကကြီးအကြောင်း ပိုသိလာတဲ့သူက ရှိသေးဗျာ။ ညံ့ချက်...။လောကကြီးမှာ ယောက်ျားကောင်း၊ မိန်းမကောင်း၊ ကျားမဟုတ် မ မဟုတ် ပေမဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိနေတာ မမြင်မတွေ့ရအောင် အကုသိုလ်တွေ ဖိစီးနေကြပုံများတော့ကွာ....တယ်.....တောက်......ပြောရင် ငသူတော် လွန်ရာကျမယ်
Posted by တီချမ်း at 11:41 PM
Bino December 4, 2009 at 2:40 AM
I got bad feeling about thu comment.
Everybody has right to believe.
right to think.... right to talk....
All human blood are red..
It is doesn't matter who isaman, woman, homosexual....
I never know who is တီချမ်း....
I saw her or his comments on Ritaco blog....
Just2days ago, I visited to တီချမ်း blog...
I readalot and kept quiet.
We, blog reader have to respect each other.
Don't be trouble.
If you don't like her or his post, you can discuss or advise or argue with him.
I think you have not yet watched the picture " MILK"
ဝေလင်း December 4, 2009 at 3:01 AM
စိတ်မကောင်းပါဘူးတီချမ်းရယ်။ blog ရွာလေးမှာ ဒီလိုလူတွေမရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ မောင်နှမတစ်တွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်....
အန်တီချမ်း December 4, 2009 at 5:21 AM
4 Dec 09, 00:15
ုkom: be strong!
တီချမ်း: i am strong and none taken, just pity for him, poor guy, but i also thanks him
တီချမ်း: makes me see life from different perspectives
4 Dec 09, 05:21
အန်တီချမ်း December 4, 2009 at 5:28 AM
thanks for becoming regular visitor
i think this thanks also goes to ko thu daw
and i like the fact that u always write ur comments in english
and of course also goes to ko thu daw
thu December 4, 2009 at 11:44 AM
ကျုပ် စကားလုံးတွေ မိုက်ရိုင်းချင် မိုက်ရိုင်းမယ်.. သို့ပေသည့် အဲဒီ စကားလုံး အရိုင်းတွေက အမှန်တွေ......။
ဒီလောက် စာရိတ္တ ယ်ိုယွင်းပျက်ပြားနေတဲ့သူတွေ (ကောင်းတဲ့ အချက် တစ်ချို့လဲ ရှိမယ်။ သို့ပေသည့် ဘာတွေလဲ..) ။ လူသား အကျိုးပြုတွေ လုပ်နေတာလား။ ပိုက်ဆံရလို့ လုပ်နေတာလား။ ခွဲခြား မြင်စေချင်တယ်။
ကျုပ်က အမြင်မတော်တည့်တာ တွေ့ရင် ပြောရလိမ့်မှာပေပဲ။
အမြင်မတော် ကျော်သွားဆိုတာ အလကားရတဲ့ ဘလော့မို့ ကိုယ်ရေးချင်တာ ရေးမယ် ဆိုတဲ့ သူတွေရဲ့စကား။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ လိုလားတဲ့ စကား မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိချပ်စေချင်တယ်။
မဟုတ်တာတွေ ရေးနေသမျှ ကျုပ်က မိုက်ရိုင်းပြရ.. ပြောနေရအုံးမယ်။
အခြောက်မ ဆိုတာကို အထင်သေးလို့ မဟုတ်ဘူး။ စာအတော်များများမှာ လူတကာ ဖင်လိုက်ခံနေတာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားပြနေတော့ တစ်ခြား လိင်တူချစ်သူတွေ အားကျပြီး အတုယူမှားကြရင် မခက်ပေဘူးလား။
နောက်ပြီး.. အပြစ်မဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေနဲ့က ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျာ။
သူတို့တွေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဘ၀ပျက်ကြရရင် မခက်ဘူးလားးး။
ဘလော့ရေးတဲ့ မောင်နှမတွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခင်မင်ကြ ကာကွယ်ပေးကြတာကို ကျုပ် မပြောလိုဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျုပ် ဘာကြောင့် ၀င်မိုက်ရိုင်းတာလဲဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင် ဦးဏှောက် မရှိကြတဲ့သူတွေပဲ ၀ိုင်းကူ အားပေးကြ၊ ဆဲကြပေါ့ဗျာ။
အရပ်ပျက်မထက်သာလို့ သာတယ် ပြောတာ ကျုပ်လွန်သလား။ ဒီရောဂါ ဒီလိူလူမျိုးမှာ ဖြစ်ရုံမက ဒီလူဆီကနေ တစ်ခြား လူ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဖြန့်ခဲ့ပြီလဲ မသိတဲ့သူတွေ နာကြပေတော့....။
အန်တီချမ်း December 4, 2009 at 12:50 PM
4 Dec 09, 11:41
အသေးလေး: လူ့အခွင့်ရေးဆိုတာ နကန်းတစ်လုံးစာမျှ နားမလည်တဲ့ ကိုသူတော်ဆိုတဲ့ စာလာဖတ်၊ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ၀င်ရောက်
4 Dec 09, 12:01
HM: TChan, don't care abt them, all know that ur mind n ur works
အန်တီချမ်း December 4, 2009 at 12:51 PM
4 Dec 09, 12:38
မေလေး: တီချမ်းး မေလေးစာလာဖတ်ဒယ် ဘာမှမပြောခဲ့တော့ဘူးး ခုတလောကံမကောင်းဘူးး
အန်တီချမ်း December 4, 2009 at 1:21 PM
ကျမ မိယာပါ။ ညည်း ဘလော့ခ်က ဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူး။
ကွန်မင့်တက်မင့်လို့ မရတော့ စာနဲ့ ပြန်လို့ လိုက်တယ်အေ။
ကော်ပီ ဖိတ်စ်ထ် လို့ ရရင်လည်းလုပ်လိုက်။
ငါကွန်မင့်ရေးဖို့ လုပ်နေတာနဲ့ တင် ငါအသက်တိုလိမ့်မယ်။
ရှင်နဲ့ ယာ ဒီလောက်ခင်တာတောင် ယာရှင့် ဘလော့ခ်ကို ဒီလောက်မှန်မှန် မဖတ်ဖြစ်ဘူးအေ။
ရှင်ကဗြောင်ကျကျတွေရေးတော့ ရှင့်ကိုသူငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ ကျမမိယာတောင် မနာလိုဖြစ်တယ်အေ။
ကျမလဲဖင်ခံတော့ အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေများ ဖင်လိုက်ခံမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျမချီးစားရင်တော့သူတို့ များလဲ လိုက်စားမှာပေါ့နော်။ ကျေနပ်တယ်။
လူတစ်ချို့ ကလေ လူသိမများတော့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ တမင်သက်သက်ဇတ်ထွင်တာတွေရှိတယ်။
ပင်ပန်းတယ်အေ။ ခုနဖတ်ဖတ်ချင်းတုန်းကတော့ ဒေါသထွက်လိုက်တာ။ အခုတော့လည်း ဒီလို မပြည့်ဝတာလေးတွေ၊ စိတ်မမှန်တဲ့သူလေးတွေရှိမှာပဲ။ ဥပက္ခာပြုလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး တော်ပြီ။ ကျမမိယာ ဘာမှကို မပြောတော့ဘူး။
jr.lwinoo December 5, 2009 at 12:27 AM
တီရေ.. ကြားထဲက ဒီကလဲ အဆစ်ပါသွားတယ်။
ဂျူပြောတဲ့ လူတွေအကြောင်းပိုသိလာတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တီနားလည်မှာပါ။ စကားမစပ် .. ဘာသာပြန်ရေးဦး။ စပြီးနေပြီလေ.. :D
အန်တီချမ်း December 5, 2009 at 5:53 PM
5 Dec 09, 09:59
အသေးလေး: တီချမ်း..ခွေးဆိုတာ ကိုက်တတ်တဲ့အမျိုး၊ ကိုက်တာကို စိတ်ဆိုးလို့မရဘူးလေ၊
5 Dec 09, 10:00
အသေးလေး: အကိုက်မခံရအောင် ဝေးဝေးက ရှောင်သွားတာ ကောင်းပါတယ် တီချမ်းရယ်
အသေးလေး: တီချမ်း စိတ်ကြိုက် ၀တ်ပါ၊ သွားလာပါ ၊ ခွေးရှေ့တော့ ဖြတ်မလျောက်နဲ့ပေါ့
5 Dec 09, 10:01
အသေးလေး: မဟုတ်ရင် ကိုက်တော့..တီချမ်း အလုပ်များတယ်..အကိုက်ခံရမှာစိုးတယ် တီချမ်း
ShweNaw December 11, 2009 at 3:42 AM
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမိုက်ရူးရဲ တီချမ်းဂေးမကြီးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးနေတာ ရပ်တန်းကရပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ သူက သေမထူး နေမထူးမို့အဲလိုတွေ လျှောက်ရေးနေပေမယ့် တခြား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြန်မာဂေးတွေကို လူအထင်သေးစေပါတယ်။ သူများတွေ အောက်တန်းကျတာ မကျတာတော့ မသိပါဘူး။ သူ နဲ့ သူ့ အပေါင်းအပါတွေ အောက်တန်းစား ဆန်ဆန် ဂေးအချင်းချင်း နိမ့်ချ အနိုင်ကျင့် ဝိုင်းကိုက်တာကို ခံခဲ့ရတာ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကို တွင်တွင်သုံးပြီး လူ့ အခွင့်အရေးတွေကို နှလုံးတကန်းမှ မသိတဲ့ ဒီ ကြီးမိုက်ကြီးကို အားပေးနေတာတွေဟာ အကျည်းတန် ဆန်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ မှာ သားသမီး ရှိရင် ဒါတွေ ပေးဖတ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးလေး စတွေးကြည့်ပါ။ ဆိုက်ကိုဝင်လာတာနဲ့ တင် တော်တော် ကျက်သရေတုံးနေပါပြီ။ သူများ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို လုံးတီးပုံတွေတင်ရင်တောင် အရင်ဆုံး သတိပေးစာတွေလာပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘာမှ နားမလည် ရေးချင်တာတွေ ဇွတ်ရေးနေတာကို အဆိပ်ပင်ရေလောင်းနေတယ်လို့ မြင်မိလို့ တခြားဂေးတွေအတွက် တားချင်ပါတယ်။ သူ ရဲ့ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းပြီး အောင်တန်းကျတဲ့အပြောအဆိုတွေကတော့ ခံဖူးထားလို့ ရိုးနေပါပြီ။ ကျမ ကလည်း သူလို ဂေးမပဲကိုး။ မျက်နှာပြောင်လို့ ၆မတွေ လုပ်နေကြပေမယ့် သူက သူများထက်ထူး နှဖူးလီးပေါက် (ကန်တော့ပါရဲ့ ) နေတော့ သူအစား ကျမ ရှက်ပါတယ်။
I spoiled myself on Saturday (12.12.2009)
comment for rita (မြို့မေတ္တာခံယူမယ့်သားပေမို့)